Johnny Knoxville – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Above Suspicion (2019) Unicode နဂါးမယျတျော Emilia Clarke ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျကိုအခွခေံထားတဲ့ imdb 5.5 ရထားတဲ့ ဇာတျကားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ အိမျထောငျရှိ FBI Agent တဈယောကျဖွဈတဲ့ Mark ဟာသူရာထူးတိုးဖို့ မူးယဈဆေးဝါးအမှု့တှကေိုလိုကျရငျး သတငျးပေး Susan Smith နဲ့ ညှိစှနျးမိပီးဘာတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကွညျ့ရမဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။နောကျဆုံး Susan Smith အသတျခံရလိုကျတဲ့အခါ ဘယျသူသတျလိုကျတာလဲ ? Susan Smith ရဲ့ ယောကျကြားလား ဒါမှမဟုတျ မူးယဈဆေးဝါးတှနေဲ့ ပတျသကျနလေား ? FBI Agent ဖွဈတဲ့ Mark ပဲလားဆိုတာ ဇာတျကားမှာစောငျ့ကွညျ့လိုကျပါအုံး ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Van ဖွဈပါတယျ Zawgyi နဂါးမယ်တော် Emilia Clarke ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတဲ့ imdb 5.5 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရှိ FBI Agent တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark ...
IMDB: 5.5/10 1488 votes
Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) ပရိတ်သတ်ကြီး စောင့်မျှော်နေတဲ့ TMNT ဇာတ်ကား နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက တစ်ချိန်တုန်းက နာမည်ကြီး ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ ကာတွန်းစာအုပ် တွေထဲက Superheros ဖြစ်တဲ့ TMNT ကို ပြန်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူက အခုမှ ရုပ်ရှင်ထွက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၉၀ တုန်းက ဇာတ်ကား ၃ကားထွက်ထားဖူးသလို၊ ၂၀၀၇ မှာလည်း ကာတွန်းအနေနဲ့ထွက်ထားဖူးပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှာ April O’Neil (Megan Fox) က သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး New York မြို့က Foot Clan ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းကို လိုက်လံသတင်းယူနေရာကနေ Turtles တွေနဲ့ အမှတ်မထင်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ သူမ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို သတိရသွားပြီး Turtles တွေရဲ့ Origin ကို မှတ်မိသွားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆရာ Splinter က ...
IMDB: 5.8/10 191,514 votes